(အခန်း - တစ်)
(အခန်း - နှစ်)
(အခန်း - သုံး)
(အခန်း - လေး)
(အခန်း - ငါး)
( ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မြန်မာစာဌာနမှထုတ်ဝေခဲ့သည့်
ကျောက်စီလျှင် လေးမည်စိုးတာမို့ စုပေါင်းကဗျာစာအုပ်မှ )
Posted by wai lin tun at 4:20 PM Labels: စိတ်ကြိုက်စာ
ကဗျာလေးက လှလိုက်တာ။ စာသားလေးတွေကလည်း နုရွနေတာပဲ။
ပျော်ပျော်ပါးပါး၊ မယားနဲ့ဆွေငယ်လင်...” ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ကလေးတွေကို ထပ်ကာထပ်ကာ ရွတ်နေရသလိုပဲ။ ဘာကဗျာအမျိုးအစားခေါ်သလဲမသိ။ ဖတ်လို့ကောင်းတာ၊ ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ရာကောင်းတာကတော့ အမှန်ပဲ။
ချစ်စရာကဗျာလေးတပုဒ်လို့.. ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့.. အတွေး နယ်ကျယ်သွားတယ်..သေခြင်းတရား.အနားအထိပါ ခေါ်သွားတယ်။
အားလုံးလဲဖတ်ပြီးတော့ .. ဟိုးငယ်ငယ်တုန်းက ကောင်မလေးတယောက်ကို သတိရမိတယ်.. :P
သစ်ခွလို.. အနံမရှိတဲ့ လှခြင်းမျိုးပါ..
whatagreat rhyme!
"Lay Htel Ka Lay Mike"
this isagreat usuage on the poetic-lane!
ဆိုထားတဲ့ ခရမ်းပြာ ကိုသွားသတိရတယ်။
အဲဒါ တျာချင်းတို့ အိုင်ချင်းတို့နဲ့ဆင်ပေမယ့် မတူဘူးဗျ။ သံပေါက်လို့ခေါ်မယ်။ ဘုန်းကြီးတွေတရားပြရင် ချိုးလေ့ရှိတဲ့စာမျိုးပေါ့။ ဒါကို ဆရာက အနုအရွဖြစ်အောင် ဖွဲ့ခဲ့တာ။ ဒီနောက်လည်း ဒါမျိုး ဘယ်သူမှမရေးနိုင်တော့ဘူး။ မြန်မာစာပေအတွက်တော့ ဒီကဗျာက အဖိုးတန်ရတနာတခုပဲလို့ ကျနော်ကတော့ ယုံတယ်။ ဆရာကတော့ မြန်မာစာပြကျုရှင်ဆရာလေးတယောက်အဖြစ် မြို့ငယ်လေးတခုမှာ မထင်မရှား ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါပြီ။
ဟုတ်တယ်၊ ကဗျာလေးက လှလည်းလှတယ်။ ပြီးတော့ အဆီအနှစ်လည်းပါတယ်
ဒိကဗျာလေးက အဲဒီဆိုင်နဲ့ အဲဒီသီချင်းတွေရဲ့ အစလို့ပြောရင်လည်း မမှားနိုင်ပါဘူးဗျာ။
ဒီကဗျာကို ကော်ပီလုပ်ပြီး သိမ်းခွင့်ပြုပါ အကိုကြီးရေ။